Jordania: Naningotra ny fotoana nampanonofy antsika ve ny teknolojia? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jolay 2010 7:32 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, বাংলা, Français, عربي, Português, Español, English
Taratasy avy any amin'ny namana, sary nalain'i D Sharon Pruitt
Mitàna andraikitra lehibe eo amin'ny fiainantsika andavanandro ny solosaina sy ny teknolojia. Mahatsiaro ny fotoana nampanonofy eo am-pandraisana taratasy amin'ny alalan'ny paositra ny mpitoraka blaogy iray avy any Jordania ary hoy izy ao anaty blaoginy: “Hàlako ny elekraonika.”
Mamintina (Ar) ny heviny etsy ambany i Umm Omar:
Amin'ny lafiny iray, izy io dia namotika ny fientanam-pontsika – sy ny fihetseham-pontsika izay tsy ho tsapan'ny taranatsika any aoriana mihintsy. Tsy ho azon'izy ireo an-tsaina na oviana na oviana ny faniriantsika, ny fahamaizantsika ary ny fahafinaretana azontsika fony andron'ny hoe an-taratasy no nifanoratana. Nila nandany herinandro iray manontolo mihintsy ianao nieritreretana ny zavatra tianao soratana tao anaty taratasinao, inarivony kely ianao manova izay efa voasoratra. Te hangataka andro foana ianao na dia efa iny an-dàlana ho eny amin'ny paositra iny aza, ary rehefa avy nandrotsaka ny taratasinao ianao dia mandefa eritreritra sy manao kisarisary an-tsaina ny amin'izay mety hisoritra eny amin'ny endriky ny mpandray ilay taratasy.
Hoy izy manohy izany:
Handefa fisainana ianao: Mety hampihomehy azy ve ny zavatra nosoratako? Haiko tsara ve ny nisafidy ny teny nampiasaiko sa tsia…Ho tezitra ve izy ka tsy hamaly ny taratasiko… Ho…….ve izy?
Tsy hitsahatra ny hitaintaina sy hieritreritra ianao isan'andro ary hiverina any amin'ny paositra mihoatra ny indray mandeha, ary indraindray aza, indroa na intelo mandritr'io andro io mandra-paharainao valiny araka ny efa nantenainao ao anatin'ny singan-taratasy iray. Hitsiky anankam-po ianao rehefa mahazo taratasy iray misy tantara fohy izay tsy hisy hahalala, ary nosoratana manokana ho anao…
Ho anao manokana…
Fihininao mafy ilay izy …
Fofoninao ilay izy …
Mitondra anao any amin'ny tontolo hafa izy…na dia singan-taratasy iray fotsiny aza.
Mandritry ny andro maromaro, ho faly foana ianao ary ho tsapanao ohatran'ny te hanajanona ny olona eny an-dalana ianao hitantaranao ny fahasambaranao. Tianao hiverina foana izay fotoana izay ka hanosika anao hanoratra taratasy iray hafa indray …
Mamaly izany i Haitham Al Sheeshany, mpamaky iray:
إيجابيات و سلبيات كل مسألة كغيرها 🙂
Miombon-kevitra aminao aho ny amin'ny hoe manisy fetrany betsaka ny fihetseham-po mahafinaritra sy tena marina ny teknolojia. Ekena mazava loatra fa nampivoatra sy nanamora ny fifaneraseran'ny be sy ny maro izy. Misy lafintsarany sy lafiratsiny maro ao , toy ny amin'ny zava-drehetra hafa ihany 🙂
Manampy izany i Ashraf Mohidden, mpamaky iray:
أما المشاعر والأحاسيس الجميلة التي أصبح من الممكن إيصالها للطرف الآخر بدون عناء ومن خلال كبسة زر إن جاز التعبير فهي دلالة هذا العصر المتسارع في كل شيء مما جعلها كمطاعم الوجبات السريعه 🙂
Lasa fototry ny seraseran'ny fiaraha-monina amin'izao vaninandro iainantsika izao ny teknolojia, tarihan'ny aterineto.
Tsotra dia tsotra izao ny mizara ny fihetseham-po sy fientanam-po mahafinaritra ary izany dia eo am-panindriana bokotra iray fotsiny. Porofon'ny rotorotom-piainana iainantsika io, izay nahatonga ny fanehoana ny fientanam-po toy izany ho tahaka ny vita vaotra tonga dia raisina (fast food):)
Ary farany nefa manan-danja tokoa, manambara nyWhite Freedom:
Ny teknolojia dia nahatonga antsika hanary ny tena hevitry ny hoe: fifandraisana amin'ny tsirairay avy, eny na amin'ny andro firavoravoana aza. Raha tokony hiantso sy hiarahaba ny hafa aza isika, dia mandefa hafatra an-tsoratra fohy fotsiny amin'ny alalan'ny finday, izay dia vita. Valiantsika amin'ny hafatra an-tsoratra fohy koa izany hafatra izany. Niova tanteraka mihintsy izao tontolo izao!
Tsy manome tsiny anao aho. Ilaina amin'ny zavatra maro hafa ny teknolojia fa ny fampiasana azy diso tafahoatra loatra no mahatonga antsika hankahala azy ka mahavery ny tena heviny.
Naningotra ny fotoana nampanonofy antsika ve ny teknolojia? Miangavy anareo handray anjara amin'ny adihevitra atao ao amin'ny faritra natokanay ho fametrahana fanamarihana.